DHA နာမည်ကြီးတယ်လို့ ပြောပြောနေကြတဲ့ဆေး – Burmese Baby
၁။ ဆရာရှင့် ကျွန်မ က အသက် ၂၄နှစ်ပါ။ အမျိုးသားက ၂၈ပါ။ ကျွန်မတို့က့့ ဇာတိပါရှင့်။ မီးဖွားပြီးတာ ၄၈ရက် ရှိပါပြီ။ သမီးလေးပါရှင့်။ မိခင်နို့တိုက်တာပါ။ Nature Made ကထုတ်တဲ့ Postnatal အားဆေး သောက်လို့ရလား သိချင်လို့ပါရှင့်။ အဲဒီဆေးသောက်ရင် တခြားဘယ်ဆေး (eg. Fish oil etc.) ထပ်သောက် ဖို့လိုသေးလဲဆိုတာ သိပါရစေရှင့်။ ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ဆရာ။
၂။ ဆရာရှင့် ဆရာရေးထားတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ အားဆေးစာလေးဖတ်ပြီး မေးချင်လို့ပါရှင့်။ တချို့ကိုယ်ဝန်ဆောင် အားဆေးတွေမှာ DHA ဆိုပြီးပါတာတွေ့လို့ပါ။ ပြီးတော့ အခုတလော ကြားမိတာက ကလေးတွေ သောက်တဲ့အားဆေးမှာ DHA ပါရင် ဉာဏ်ကောင်းတယ်ပြောကြတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေရော အဲလိုပါတာ သောက်သင့်မသင့် သိချင်လို့ပါရှင့်။ ဗိုက်ထဲက ကလေးအတွက်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
ကြော်ငြာဆေးကို အတော်ကိုမေးကြတယ်။ နာမည်ကြီးတယ်လို့ပြောတဲ့ဆေးဆိုရင် သိပ်မဟန်တာ သေချာပြီ။
DHA ဆိုတာ ဖက်တီးအက်စစ်တမျိုးဖြစ်တယ်။ ပင်လယ်ငါးတွေမှာပါတယ်။ DHA (docosahexaenoic acid) နဲ့ EPA (eicosapentaenoic acid) မတူပါ။ နှစ်မျိုးလုံးက ငါးကြီးဆီတွေဖြစ်ကြတယ်။ ကိုယ်ထဲရောက်ရင်လည်း DHA ကနေ EPA အဖြစ်ပြောင်းတယ်။
DHA ကိုအားဆေးအနေနဲ့သုံးကြတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန်မပြည့်တဲ့ကလေးတွေအတွက် နို့မှုန့်ထဲမှာ ထည့်ပေးထားတယ်။ မိခင်နို့ထဲမှာပါနေပြီးဖြစ်တယ်။ DHA ကို Arachidonic acid နဲ့ရောပြီး ကလေး ၄ လကနေ ၆ လ ကိုပေးတယ်။ တချို့ရောင်းကုန်အဖြစ် Evening primrose oil ဆီ၊ Thyme oil ဆီနဲ့ Vitamin E ကိုပါရောပြီး ကြော်ငြာတယ်။
အစားအသောက်ထဲက ပျမ်းမျှတနေ့မှာ Omega-3 1.6 grams ရနေကြတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ALA 1.4 grams နဲ့ EPA + DHA 0.1-0.2 grams ပါနေတယ်။ အစားအသောက်ထဲမှာ Omega-6 ပါတာဟာ Omega-3 ထက် (၁ဝ) ဆ ပိုတယ်။
• အမေရိကန်နှလုံးအသင်းက အဆီပါငါး တပါတ်မှာ ၂ ခါ စားဘို့အကြံပြုထားတယ်။ WHO ကတော့ EPA နဲ့ DHA 0.3-0.5 grams နဲ့ ALA intake of 0.8-1.1 grams နေ့စဉ်စားဘို့ ဖြစ်တယ်။
• Aggression စိတ်ကြမ်းတမ်းခြင်းအတွက် DHA + EPA 1.5-1.8 grams (သို့) DHA 1.5 grams နဲ့ EPA 0.2 grams ကို ၂-၃ လသောက်ပါ။
• မွေးလာမယ့် ကလေးငယ်လေးမှာ အလာဂျီမဖြစ်အောင် ကိုယ်ဝန် ၂၅ ပါတ်ကစပြီး နောက် ၃-၄ လမှာ 1.6 grams of EPA and 1.1 grams of DHA သောက်ပါ။
• စိုးရိမ်စိတ်များခြင်းအတွက် အိုမီဂါသရီးဆေးတောင့် EPA 450 milligrams + DHA 100 milligrams + omega-3 fatty acids 50 milligrams ၃ လသောက်ပါ။
• သွေးလွှတ်ကြောတွေတင်းနေခြင်းအတွက် (EPA + DHA or 360-1800 milligrams of DHA + 120-1,800 milligrams of EPA) one-gram capsules ဆေးတောင့် ၆-၁၂ ပါတ်။
• ပန်းနာအတွက် 2.7-3.2 grams of EPA + 1.8-2.2 grams of DHA or 0.2-1.0 gram of EPA + DHA, 20 milliliters of fish oil, or 10-20 grams of perilla seed oil (ALA) ၁၂ လ။
• အားကစားသမားတွေ ၈ တောင့် နေ့စဉ် ၈ ပါတ်။ Fish oil capsules (3.2 grams of EPA plus 2.2 grams of DHA) ၃ ပါတ်။
DHA ဆေးက နာမည်တော့ကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆေးသုတေသနကိုဖတ်ပါ။
• Age-related macular degeneration (AMD) အသက်ကြီးလို့ချို့ယွင်းလာတာတွေ၊
• High cholesterol ကိုလက်စထောများတာ၊
• Attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD) ကလေးပတ်ဝန်းကျင်ကို သတိမမူတဲ့ စိတ်ရောဂါ၊
• Mental performance စိတ်ရောဂါ၊
• Diabetes ဆီးချိုရောဂါ။
• Alzheimer’s disease ရောဂါ၊
• Cystic fibrosis ရောဂါ၊
• Dementia ရောဂါ၊
• Dyslexia ရောဂါ၊
• Improving infant development ရောဂါ၊
• Liver disease (nonalcoholic fatty liver disease) အသည်းအဆီဖုံးရောဂါ၊
• Prostate cancer ဆီးကျိတ်ကင်ဆာရောဂါနဲ့
• Inherited vision loss (retinitis pigmentosa) ရောဂါတွေဖြစ်တယ်။
• ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ ကလေးနို့တိုက်ချိန်မှာ မသင့်ပါ။
• Aspirin ဆေးနဲ့တွဲမသောက်သင့်ပါ။
• သွေးတိုးကျစေလို့ သွေးကျဆေးနဲ့တွဲရင် ဆေးထိန်းရခက်တယ်။
ကလေး အချင်းချင်း နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
၃ နှစ်အောက်ကလေး စားစရာ ကျွေးလျှင်